Resistance band Vagadziri - China Resistance bhendi Fekitori & Vatengesi
Yakasarudzika Fabric Resistance Bhandi peach huduru denderedzwa zvakapambwa mabhendi
Hip band inogadzirwa nepolyester uye latex silika, saka tinogona kuita zvakasiyana kusimba.Kazhinji, saizi saizi ndeye S / M / L, S = 66cm kureba, M = 76cm kureba, L = 86cm kureba, Yese iyi yakafara ndeye 80mm yakafara. Ehezve, iwe unogona tsika dzakasiyana nhanho yesimba kana uchida.
2021 Yakanakisisa Natural latex chubhu 11pcs 12pcs Kuramba mabhendi akaisa kumusoro kwemuviri kurovedza chubhu maseti pamwe nekuchengetedza jira chivharo
Bhendi rega rega rakasiyana mumavara uye nhanho dzekudzivirira: Yero - 10lbs, Bhuruu - 15lbs, Tsvuku - 20lbs, Green - 25lbs, Nhema - 30lbs, nehuremu hwese hwekudzivirira hwe75lbs. Unogona kugadzirisa kukakavara kuzadzikisa zvinangwa zvako nekushandisa bhendi rimwe chete kana kusanganisa mabhendi mazhinji, akakwana kune vanotanga kana nyanzvi, varume, vakadzi, vechidiki kana vana.
Kupisa Kutengesa Arm Dhonza Up Simba Kudzidziswa 8 Shape Resistance Exercise Tube Bhendi
Zita: 8 mhando strecth bhendi
Saizi: 40 * 15cm
Ruvara: Pinki, Pepuru, Bhuruu, Tsika
Yakasarudzika logo TPE yoga bhendi, Exercise Rubber kuramba bhendi, Workout kusimba Latex yemahara theraband
Iyo lap ine yakasimba kugadzikana, uye inoshanda mushe pamwe neyakafambiswa mune iyo yoga kudzidzisa kuwana zvirinani plastiki. Inokodzera vechidiki nevakadzi vane simba rakaderera. Iyo inogona kunyatso kutambanudza uye kurovedza muviri wese mhasuru, kudzikamisa mamiriro uye kudzora iyo yekuwedzera chinhambwe, kunyatso kuvandudza iko kuita kwekuita kugona, uye kuumba iwo wakakwana muviri munyonga. Unogona kuwedzera kunakidzwa kwekurovedza muviri uye kuchinja imwechete kurovedza maitiro.
Fekitori inopa yakananga latex yakatambanudza jimeti simba kurwisa kusimba bhendi Latex dhonza kumusoro kubatsira bhendi
Chekutanga pane zvese, ichi chinhu chinogonesa eco-zvine hunyanzvi chigadzirwa chakagadzirwa ne100% yakasarudzika latex, Izvi zvinoita kuti ive yakashinga uye isagadzikane kushandisa. usuallty inoshandiswa pakusimbisa simba kana kurovedza muviri, unogona kuishandisa mukurovedza muviri kana kumba.
Yakakwira Hunhu Marble Muenzaniso Fitness Booty Band Exercise Hip Denderedzwa kuramba Mabhendi Ekushandira bhendi de resistencia
Yemhando yepamusoro tambo tambo ine inonakidza mhuka kudhinda - kuvaka chiuno uye hudyu simba neaya anonakidza mhuka anodhinda mahudyu. NQ mutambo we3-inch (anenge 7.6 cm) bhandi rehudyu rinogona kumisikidza hudyu, chiuno nemakumbo kubatsira kuchinja muviri wezasi. Pamberi pegumbo kurovedza muviri, shandisa yedu inorwisa-skid hudyu bhendi kuti ishandise hudyu, ishandise ivo kuwedzera simba panguva yegumbo kurovedza muviri, kana seyegumbo kurovedza kana gumbo kurovedza mushure megumbo kurovedza muviri.
Wholesale Latex 11 PCS Resistance Tube Bhendi Set Yoga Equipment Factory Kudzidzisa Bhendi China Mutengesi
Resistance chubhu yakaiswa inosanganisira 5 latex machubhu, maviri anobata, maviri mabhureki mabhureki, musuo wekusungira uye bhegi rejira. Nezve latex machubhu, isu tine tsvuku, bhuruu, yero, nhema, nhema kuti ive seti, zvimwe zvese izvo zvishongedzo zvakasviba. Kazhinji, Aya machubhu mashanu ane akasiyana lbs, Iwo 10lbs, 15lbs, 20lbs, 25lbs, 30lbs. Uku ndiko kukura kwakajairwa, asi handiyo yega sarudzo, unogona kusarudza chero ma lbs aunoda kuisa pamwechete mune seti.
Gym kusimba tsika yakadhindwa logo Yoga Stretch Bhendi Latex kurovedza mini chiuno bhendi yekudzivirira bhendi seti
Yakachengeteka uye Inogadzikana: Yakagadzirwa kubva ku100% yakasikwa latex, isina chepfu uye yekunhuhwira yemahara uye zvakare yakasununguka uye inogara yakasimba Multifunctional: Yakakwana kugwinya, kuumba muviri, kurasikirwa uremu, kuramba kudzidziswa, kudzidziswa kwesimba, kupora mushure mekusununguka, kugadzirisa kukuvara uye zvimwe nyore kushandisa. kuita zvinhu zvakasiyana-siyana uye kusimba kwechero kurovedza muviri kwaunodenha; ingochinja chinzvimbo chako kunongedza tsandanyama dzakasiyana mumaoko, chipfuva, dumbu, gluteus, makumbo, kuumba zvese zvemuviri wako nekusimudzira zvese zvehutano hwako.
Hight Huru Gym Exercise Rubber Workout Stretch Elastic Dhonza Up Floss Batsira Mabhendi
1. Iyo bhendi inogadzirwa ne100% latex ine yakanyanya kusimba, inochinjika uye yakajeka mavara.
2. Inokodzera kudzidziswa kwesimba, kumanikidza kuruka uye kufamba kwekurovedza muviri.
3. Seamless, hapana bubble, kufanana kwerudzi, anti-kuchembera, kukwenya-kusagadzikana, uye kutsetseka kwazvo pasina kukwenya.
Gym yakakwira elasticity logo tsika shanda kunze kwekusimbisa muviri 11pcs kuramba mabhendi chubhu
NQ Sport kurovedza muviri kusimba latex kuramba loop bhendi yakagadzirirwa Workout Gym
100% yakasarudzika latex, Iyo ine zvakanakira yakanaka ruoko kubata kwekunzwa uye yepamusoro mhando, zvisiri nyore kupaza uye zvakanyanya kuchengetedza kwezvakatipoteredza.Usual, yakajairwa kureba ndeye 50cm / 60cm, yakajairwa upamhi ndeye 50mm, imwe saizi iwe yaunoda inogona kuenzaniswa. Isu zvakare tine imwe sarudzo ye mini bhendi yakagadzirwa ne TPE zvinhu izvo zvinofunga nezve latex allergies mune vamwe vanhu. Ose maviri mabhendi ezvesimba akakwirira simba kune kugwinya.
Speciality Mugadziri Hip Denderedzwa Bhendi Yakatemerwa Logo China Fekitari Inotengesa Pink Muviri Bhendi